Qaabkee ayuu u dhacay weerarka Mareekanka ka fuliyay Duleedka muqdisho? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaabkee ayuu u dhacay weerarka Mareekanka ka fuliyay Duleedka muqdisho?
Ahmed weheliye Gaashaan 25 May 2018
Muqdisho ( Mareeg News ) Qoraal kasoo baxay Taliska Ciidanka Mareykanka Africa ee AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay inay duqeyn ka geysteen Saldhig ay maleeshiyaadka al-Shabaab ku leeyihiin meel 15 Mile ka xigta Koonfur Galbeed Magaalada Muqdisho.
Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay dhacday gelinkii dambe ee Arbacadii ina dhaaftay oo ku asteysaneed 23-ki bishan.
XOG:- Xildhibaan Tahriibay iyo Sabab yaab leh oo ku Kaliftay…..
Arin Qasabtay Inuu Gacantiisa Isku toogto Sarkaal ajnabi ah oo ka tirsanaa Al shabaab.